Mitambo yemavhidhiyo inonakidza kwazvo inosvika Linux muna2021 | Linux Vakapindwa muropa
Gore idzva ratosvika, 2021 yatotanga uye pamwe chete nemamwe mapurojekiti ebudiriro ayo anosvika gore rino rese. Pakati pavo, tichaona kuti vangani vanoonekwa mavhidhiyo emitambo mazita izvo zvakare zvinosvika kune iyo GNU / Linux chikuva. Chinhu chine chokwadi chekufadza vese vatambi vane tariro yekumutsiridza raibhurari yavo yemitambo panguva yasara yegore.
Kana iwe uchifarira kuziva mamwe anonyanya kufadza mavhidhiyo emitambo mazita ayo ichaonekwa panguva ino ya2021, Ndinokukurudzira kuti urambe uchiverenga zvese zvakamirira iwe mune ino nhanho nyowani yemitambo ...
2 MaCyber ​​knights: Flashpoint
4 Kudzidza Fekitori
7 KUSVIRA GRID: Kubira nekuba
8 Denda Inc: Mushonga
10 Psiconauts 2
11 Pyramid pinda
12 Skul: Iyo Gamba Slayer
13 Yekupedzisira ADOM
15 X4: Cradle Yevanhu (DLC) + Yemahara 4.0 Gadziriso
In the Neo Berlin kubva muna 2062, nherera ine makore mapfumbamwe anonzi Tina anogara neSAM-53, robhoti rinodzivirira iro hombe uye rakaomarara kwazvo. Ivo vari munzvimbo yekugara padenga redenga reguta rino remangwana iro rave rima megalopolis inodzorwa nemakambani. Munyika ino ine hukasha, musikana anofanira kudzidza kurarama ega uye kusangana nezvinetso zvitsva.
Haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti ubate Encodya, kuvhurwa kwayo kuri kurongwa muna Ndira 26, 2021.
MaCyber ​​knights: Flashpoint
Pane imwe nguva muna 2021 mumwe wemitambo yemavhidhiyo yaitarisirwa ichasvika, izvi Cyber ​​Knights: Flashpoint. A tactical RPG mune cyberpunk nharaunda. Iwe uchavaka yako timu yevabati, varwi uye mbavha kuti vakwanise kuenderera mberi kuenda kumberi mune ino nharaunda ...
Iyi ndiyo imwe yemavhidhiyo mazita emitambo yatakatotaura nezvayo muLxA. Izvo zvakarongerwa kusvika imwe nguva muna 2021, kana denda iri rikasanyanya kuwedzera uye zvoita kuti zvinhu zvese zviome. Kune avo vasati vazviziva, Asylum izita remweya rinotyisa rakafuridzirwa nemabasa e HP Lovecraft, Hammer Mafirimu uye yakakomberedzwa Euro kutyisa kwema80s.
Mumwe mutambo wevhidhiyo unozoonekwa imwe nguva muna 2021 uyu mutambo we maindasitiri kushandisa michina iyo inoshandisa kudzidza kwemuchina kuwana mhinduro kumubvunzo: katsi dzinodei chaizvo? Iyo nzira yekuvaka, kugadzira, kugadzirisa, dhizaina otomatiki yekugadzira mitsara uye kugadzirisa yako wega fekitori yezvigadzirwa zvekati ...
Pasina kupokana, rimwe remazita anotarisirwa emavhidhiyo mazita e2021 ndeaya. A munhu wekutanga kupfura epic yakavakirwa pane nyaya kubva ku4A Mitambo inosanganisa kuuraya kunouraya, kubira, kuongorora, kutya, uye kupona. Zvese mukati meimwe yenyika dzakanyudza kwazvo dzakambogadzirwa.
Nebhukadhinezari ndiwo mumwe wemitambo yemavhidhiyo inosvika mu2021 kune avo vanofarira kuvaka maguta esometric. Vatambi vachakwanisa kuona iyo isinganzwisisike nhoroondo uye tsika yeguta rekare reMesopotamiya.
KUSVIRA GRID: Kubira nekuba
Kana uchida kugura mitambo yemavhidhiyo, ipapo iwe unofanirwa kutarisisa kana ichi chimwe chinyorwa chikaonekwa. Iwe unozopinda mune wechitatu munhu nyaya uko data ndicho chombo chako chakasimba kwazvo.
Denda Inc: Mushonga
Muzere DendaImwe yemitambo yemavhidhiyo inozivikanwa yave iri Dambudziko Inc., uko vamwe vakatsvaga ruzivo rwekuti SARS-CoV-2 ingapararire sei. Zvino kwauya Mushonga, unoenderera uyu mutambo wakabudirira kwazvo. Mune ino kesi, hazvizove zvekugadzira hutachiona kutyisidzira nyika, asi panzvimbo pekutsvaga mushonga ...
Mutambo wekare wevhidhiyo we munhu wekutanga kupfura iyo yakagadziriswa zvakare nehunyanzvi hwazvino hwekushandura. Saka kana iwe waitoziva zita iri, rinodzoka rakagadziriswa ...
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezve iyo 2021 mitambo yemavhidhiyo, iwe unofanirwa zvakare kufunga nezvePsiconauts 2, mutambo wevhidhiyo uko nyaya yepsychic espionage inotorwa seinokwezva kune uno mutambo wevhidhiyo maunofanira (Raz) kushandisa masimba ako uye kugona ku nzvenga kumagumo kweZano rakavanzika rekudzosa hwakaipa Maligula kubva kuvakafa.
Imwe yemitambo yemavhidhiyo ichauya ndeiyi. Iyo inonakidza kwazvo chikuva uye chiito mutambo weavo vane mweya wevanoshamisira. Nakidzwa nerusununguko rukuru rwekuongorora mapiramidhi ayo anonyatso kuparadzwa, uye unosangana nezvisikwa zvinoshamisira zvinouraya, misungo, hupfumi, nezvimwe.
Skul: Iyo Gamba Slayer
Skul ichaonekwa muna Ndira 21, 2021. Imwe yeaya mapuratifomu emitambo yemavhidhiyo ine imwe nyaya. Mariri iwe uchave nekuchinja uye kunetsa mepu mairi kuti ugare wakangwarira. Iwe hauzomboziva izvo zvaunotarisira. Zvakare, iwe uchafanirwa kubata nechirongwa umo rudzi rwevanhu rwunorwisa nhare yaDhimoni King uye kupedza madhimoni zvachose ...
Mumwe mutambo wevhidhiyo unouya uyu ndiwo muganhu kuenda mugomba rekare. Nezvikara zvisingaverengeki, kugona, uye nemikana isingaperi.
Kana iwe uchida ngano dzeNorse, saka uchafarira iri zita rine hutsinye. Imwe yevazhinji kuongorora uye kupona mitambo yemavhidhiyo iyo inokwezva kutarisa kwako zvakanyanya. Akafuridzirwa neViking tsika, kugona kurwa, kuvaka uye kukunda ...
X4: Cradle Yevanhu (DLC) + Yemahara 4.0 Gadziriso
Pakati pechikamu chekutanga cha2021 mitambo yakati wandei yemavhidhiyo ichasvika, senge iyo DLC X4: Cradle Of Humanity, yechipiri kukura kukuru kweX4 uye izvo zvinodzosa nhevedzano iyi kuPasi. Pachave zvakare neyemahara yekuvandudza kune vhezheni 4.0.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mitambo yemavhidhiyo inonakidza inouya kuLinux muna2021